Iphone ukubonisa, iphone screen
I-TC lishishini lobuchwephesha lobuchwephesha eligxile kwi-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwesikrini sokubonisa i-LCD kunye ne-OLED kwifowuni ephathekayo. Okwangoku ingomnye wabavelisi abaphambili bemiboniso bhanyabhanya kwintengiso yefowuni ephathekayo e-China.
I-TC inabasebenzi abangaphezu kwama-500 kunye neendawo ezingaphezu kwe-5,000 zeemitha zokusebenzela ngoku, zonke azinalo uthuli, iindibano zocweyo zobushushu kunye nokufuma, kubandakanya ngaphezulu kwe-1,000 yeemitha zesikwere 100 iindibano zocweyo ezingenalo uthuli.
Inkampani ineqela elinamandla lobuchwephesha kunye nolawulo, kubandakanya ngaphezulu kwe-20 yamalungu eqela le-R & D, kukho iinjineli ezingaphezu kwe-50 zobungcali ekusebenzeni, kwizixhobo kunye nomgangatho.
Ngaba uyazi ukuba isikrini sokuqala sithathelwe indawo xa kulungiswa ...
Ngokwesiqhelo, sihlala sihlangana nemeko yokuba iscreen sefowuni ephukileyo senziwe ngengozi, ezinye iimeko zigqutyuthelwe ngeglasi, ezinye siscreen sangaphakathi asibonisi saphukile. I ...
Ngaba uyazi malunga nophuhliso lwefowuni ephathekayo? Kuyinyani ...
Ixesha le-BPM Ukuthetha ngale mveliso, abanye abantu kufuneka ukuba bayibonile. Ngapha koko, ngokungqongqo, le mveliso ayinakubizwa ngokuba siselfowuni. Esi sixhobo savela okokuqala ngenkulungwane yama-20, xa ...
Emva kwenani lescreen sokubonisa ifowuni, wher ...
Ubungakanani buhlala bungumgaqo obalulekileyo kuphuhliso lwefowuni yeselfowuni, kodwa ifowuni ephathekayo engaphezulu kwe-intshi ye-6.5 ayilungelanga ukubamba isandla esinye. Ke ngoko, ayifani ...
Kutheni le nto isikrini sijonge ezantsi xa iselfowuni ...
Makhe ndikubuze umbuzo kuqala Iselfowuni ihlala ibekwa etafileni xa ingasetyenziswa, Ngaba uyayibeka phezulu okanye uyibeke phantsi? Kodwa uyazi ntoni? Beka iselfowuni ...
Soloko ubeka umgangatho kwindawo yokuqala kwaye esweni ngokungqongqo umgangatho imveliso yonke inkqubo
I-TC isebenzisa inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, iphumelele ukuthembela kunye nokudumisa kubathengi abanobuchwephesha bemveliso ephezulu, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yobungcali